‘ट्राफिक जाम’ अब ‘खुला शौचालय’ ! सगरमाथाको लगातार बदनामी किन ? «
‘ट्राफिक जाम’ अब ‘खुला शौचालय’ ! सगरमाथाको लगातार बदनामी किन ?
प्रकाशित मिति : 26 June, 2019 10:05 am
काठमाडौं । सगरमाथामा धेरै पर्वतारोहीलाई आरोहण अनुमति दिएर ट्राफिक जामको अवस्था उत्पन्न भएको र मानिसहरुको मृत्यु भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा केही अघि नकारात्मक प्रचार भएकोमा अहिले फेरि त्यहाँको फोहरलाई लिएर नकारात्मक प्रचार शुरु भएको छ ।
यसअघिको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै गरेको बेलायत भ्रमणका क्रममा बीबीसीमा समेत ट्राफिक जाम र मृत्युको घटनाको बारेमा जवाफ दिनुपरेको थियो ।
पछिल्लो पटक एशोसिएट प्रेस (एपी)लाई उद्धृत गर्दै फक्स न्यूजले दिएको समाचारको शीर्षकमा नै सगरमाथा ‘खुला शौचालय’ जस्तो भएको भन्दै प्रचार गरिएको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष आङ छिरिङले एशोसिएट्स प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा सगरमाथाको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै मानिसहरुले त्यहाँ छाड्ने गरेको फोहोर भएको जनाएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
कति फोहोर छ भन्ने कुराको पहिला नै जानकारी नहुने र हिउँ पग्लेपछि मात्रै थाहा हुने समेत समाचारमा उल्लेख छ । क्याम्प २ मा पहिलो क्याम्पमा भन्दा बढी फोहोर रहेको र यो वर्षको आरोहण सिजनमा १७ हजार ६३७ पाउण्ड फोहोर सरकारले खटाएका शेर्पाहरुले फेला पारेको जनाइएको छ ।
छिरिङ्गले हिउँ पग्लेपछि त्यहाँबाट तल झर्ने पानीलाई समेत असर गर्ने र स्वास्थ्य समश्या उत्पन्न हुन सक्ने जनाएका छन् ।
शिविर २ मा पुग्दा १० मध्ये ८ जना शेर्पालाई पेटको समस्या उत्पन्न भएको प्राध्यापक जोहन अलले बताएको समाचारमा जनाइएको छ । उनी वेस्टर्न वाशिङ्गटन युनिभर्सिटीका इन्भायरमेन्टल साइन्स सम्बन्धी प्राध्यापक हुन् ।
उनी हालै एउटा अनुसन्धान टोलीमा रहेर सगरमाथा पुगेको जनाइएको छ । स्वतन्त्र सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिका आङ्ग दोर्जीले नेपाल सरकारले केही नियम बनाउनुपर्ने माग गरेको समाचारमा जनाइएको छ । मान्छेले त्यहाँ गर्ने फोहर कसरी हटाउने भन्ने बारेमा कुनै नियम नरहेको समेत समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
धेरैजसो आरोहीहरुले फोहोर फाल्नका लागि हिउँमा खाल्डो खन्ने गरेको तर तापक्रम बढेपछि फोहोर तल्लो भागमा रहेका मानिसहरुसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ ।
बेस क्याम्पमा रहेका मानिसहरुले पग्लेको हिउँ नै पानीको लागि प्रयोग गर्ने र त्यसले स्वास्थ्य समश्या उत्पन्न हुने जनाइएको छ । छिरिङ्ग र अन्य पर्वतारोहीले नेपाल सरकारले बायोडिग्रेडेबल ब्यागहरु मानव फोहोरकोलागि प्रयोग गर्न दिनुपर्ने जनाएका छन् । त्यसखालको ब्याग महंगो हुने र अमेरिकाबाट आयात गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।-बाह्रखरी